Acne outbreak - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ရုတျတရကျ မကျြနှာပျေါမှာ ဝကျခွံမြားတဈလုံးပွီးတဈလုံးထှကျလာတတျသညျကို လူတိုငျး အနညျးနှငျ့အမြားကွုံဖူးကွမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့နောကျကှယျက အကွောငျးရငျးမြား ကိုမူ သတိမထားမိဖွဈတတျပါသညျ။ ထိုအကွောငျးရငျးမြားကို လလေ့ာခွငျး၊ ပွငျဆငျခွငျးဖွငျ့ ပိုမိုလှပသော မကျြနှာလေးမြားးပိုငျဆိုငျကွစရေနျ ဖျောပွလိုကျပါသညျ။
ဖုနျးမကျြနှာပွငျနှငျ့ မကျြနှာ ထိတှပွေီ့း ဘကျတီးရီးယား ပွနျ့ပှားတတျပါသညျ။ ?ဖုနျးမကျြနှာပွငျကို ပုံမှနျ သနျ့ရှငျးပေးပါ။
(၂) ဗီတာမငျ ဒီ ခြို့တဲ့ခွငျး
ဗီတာမငျဒီ ခြို့တဲ့ခွငျးသညျ ကိုယျခံအားစနဈကဆြငျးစပေါသညျ။ ? ဝကျခွံ မြားစှာထှကျလာလြှငျ ဠီတာမငျ ဒီ ဖွညျ့စှကျခွငျး ပွုလုပျသငျ့ပါသညျ။
မကျြနှာပျေါရှိပုံမှနျ အရပွေား ph ကို ဖကျြဆီးပွဈ၍ ဝကျခွံပိုထှကျစသေညျ။ ? ရေ သို့ လဖ်ဘကျရညျသောကျသုံးရနျ။
(၄) မကျြနှာသဈသောရေ အမြိုးအစား
လေးလံသော ဓာတုပစ်စညျးပါဝငျသောရကေို မသုံးသငျ့ပါ။ ?ထိုရမြေိုးရှိသောနရောဖွဈပါက အစဈ(shower filter) သုံးသငျ့ပါသညျ။
အိပျရေူပကျြလြှငျ ဝကျခွဲထှကျတတျသညျကို ကွားဖူးကွပါလိမျ့မညျ။ အကွောငျးမှာ ကိုယျခံအားစနဈကခြွငျးဖွဈသောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ ?စိတျဖိစီးခွငျး ကငျးပွီး အိပျပြျောရနျကွိုးစားပါ။
အဆီအိတျလေးမြားပိတျ၍ ဝကျခွံ ပိုထှကျစသေညျ။ ? ပါးသော မိတျကပျလိမျးခွငျး သို့ မကွာခဏ သနျ့စငျပေးခွငျးတို့ ပွုလုပျနိုငျပါသညျ။
(၇) တိုနာ (Toner) မသုံးခွငျး
တိုနာကို ပုံမှနျသုံးသငျ့ပါသညျ။ အရပွေား မြှခွကေို ထိနျးပေးသောကွောငျ့ဖွဈပါသညျ။ ?နစေ့ဉျ ထိနျးသိမျးခွငျးတှငျ တိုနာကို မမသေ့ငျ့ပါ။
(၈) မိတျကပျ လိမျးသော ဘရှပျ( make up brush) သုံးခွငျး
ပိုးမှားမြား ခိုအောငျး၍ မကျြနှာနှငျ့ ထိတှရေ့နျအကောငျးဆုံးနရောဖွဈသညျ။ ?တဈပတျတဈခါ ပုံမှနျ သနျ့ရှငျးဆေးကွောသငျ့ပါသညျ။
အရပွေားခွောကျသှစေ့ခွေငျးကွောငျ့ ဝကျခွံ ပိုထှကျလာတတျပါသညျ။ ?ရဓောတျဖွညျ့ ဆပျပွာ(သို့) မကျြနှာပေါငျးတငျ ခွငျးနှငျ့ တှဲဖကျသုံးသငျ့ပါသညျ
အဆီပိုမိုထှကျစပေါသညျ။ ? အသီးအရှကျကို ပိုမိုစားသငျ့ပါသညျ
(၁၁) အလှကုနျမြား ခဏခဏပွောငျးသုံးခွငျး
အရပွေား မြှခွေ PH ကို ပကျြစပေါသညျ။ ? တဈခု မပွောငျးခငျ ၃ ပတျခနျ့စောငျ့ကွညျ့သငျ့ပါသညျ
ရုတ်တရက် မျက်နှာပေါ်မှာ ဝက်ခြံများတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးထွက်လာတတ်သည်ကို လူတိုင်း အနည်းနှင့်အများကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းများ ကိုမူ သတိမထားမိဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းရင်းများကို လေ့လာခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုလှပသော မျက်နှာလေးများးပိုင်ဆိုင်ကြစေရန် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
ဖုန်းမျက်နှာပြင်နှင့် မျက်နှာ ထိတွေ့ပြီး ဘက်တီးရီးယား ပြန့်ပွားတတ်ပါသည်။ ?ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို ပုံမှန် သန့်ရှင်းပေးပါ။
(၂) ဗီတာမင် ဒီ ချို့တဲ့ခြင်း
ဗီတာမင်ဒီ ချို့တဲ့ခြင်းသည် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကျဆင်းစေပါသည်။ ? ဝက်ခြံ များစွာထွက်လာလျှင် ဠီတာမင် ဒီ ဖြည့်စွက်ခြင်း ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
မျက်နှာပေါ်ရှိပုံမှန် အရေပြား ph ကို ဖျက်ဆီးပြစ်၍ ဝက်ခြံပိုထွက်စေသည်။ ? ရေ သို့ လဖ္ဘက်ရည်သောက်သုံးရန်။
(၄) မျက်နှာသစ်သောရေ အမျိုးအစား
လေးလံသော ဓာတုပစ္စည်းပါဝင်သောရေကို မသုံးသင့်ပါ။ ?ထိုရေမျိုးရှိသောနေရာဖြစ်ပါက အစစ်(shower filter) သုံးသင့်ပါသည်။
အိပ်ရေူပျက်လျှင် ဝက်ခြဲထွက်တတ်သည်ကို ကြားဖူးကြပါလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကျခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ?စိတ်ဖိစီးခြင်း ကင်းပြီး အိပ်ပျော်ရန်ကြိုးစားပါ။
အဆီအိတ်လေးများပိတ်၍ ဝက်ခြံ ပိုထွက်စေသည်။ ? ပါးသော မိတ်ကပ်လိမ်းခြင်း သို့ မကြာခဏ သန့်စင်ပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
(၇) တိုနာ (Toner) မသုံးခြင်း
တိုနာကို ပုံမှန်သုံးသင့်ပါသည်။ အရေပြား မျှခြေကို ထိန်းပေးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ?နေ့စဉ် ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင် တိုနာကို မမေ့သင့်ပါ။
(၈) မိတ်ကပ် လိမ်းသော ဘရှပ်( make up brush) သုံးခြင်း
ပိုးမွားများ ခိုအောင်း၍ မျက်နှာနှင့် ထိတွေ့ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ ?တစ်ပတ်တစ်ခါ ပုံမှန် သန့်ရှင်းဆေးကြောသင့်ပါသည်။
အရေပြားခြောက်သွေ့စေခြင်းကြောင့် ဝက်ခြံ ပိုထွက်လာတတ်ပါသည်။ ?ရေဓာတ်ဖြည့် ဆပ်ပြာ(သို့) မျက်နှာပေါင်းတင် ခြင်းနှင့် တွဲဖက်သုံးသင့်ပါသည်
အဆီပိုမိုထွက်စေပါသည်။ ? အသီးအရွက်ကို ပိုမိုစားသင့်ပါသည်
(၁၁) အလှကုန်များ ခဏခဏပြောင်းသုံးခြင်း
အရေပြား မျှခြေ PH ကို ပျက်စေပါသည်။ ? တစ်ခု မပြောင်းခင် ၃ ပတ်ခန့်စောင့်ကြည့်သင့်ပါသည်